Inyanga yodumo ecaleni lokwebiwa kuka-R103 million - Ilanga News
Home Izindaba Inyanga yodumo ecaleni lokwebiwa kuka-R103 million
Inyanga yodumo ecaleni lokwebiwa kuka-R103 million
Isolwa ngokuhlomula emalini eyakhwatshaniswa ebhange i-Absa
UMNU Khumbulani “Mabalengwe” Ntombela obhekene necala elimayelana nokukhwatshaniswa kuka-R103 million kwa-Absa
INGENE kwelikhulu ihlazo inyanga yodumo ezibiza ngenkosi yezinyanga, uMnu Khumbulani “Mabalengwe” Ntombela (43), ngesikhathi ishaqwa ngamaphoyisa isemzini wayo, ngezinsolo okuthiwa ngezokuntshontsha nokukhwabanisa isizumbulu semali yakwa-Absa, ewu-R103 million. UMnu Ntombela angase adlelwe imoto yakhe eyiMercedes V250d, okuthiwa ibiza u-R2 million, ngezinsolo zokuthi yathengwa ngemali eyakhwatshaniswa kuleli bhange Waziwa ngokuthi uhlale echoma ngokuthi uyinyanga enemali, uhamba ngezimoto ezibizayo, aze ashuthe izithombe nezithombemnyakazo (videos) ekhombisa ngensavunsavu yemali.
Le nyanga isagqunywe ezitokisini kuze kube ifaka isicelo sebheyili ngoLwesithathu enkantolo ebhekelele amacala ezemali, iPalmridge Specialised Crime Court. Iboshwe ngemuva kophenyo olunzulu obelwenziwa ngoKlebe, oluveza ukuthi yaba ngomunye wabantu abahlomula kwisizumbulu sika-R103 million, okuthiwa santshontshwa nguMnu Xolela Masebeni, owayesebenza njengonjiniyela wamakhompyutha e Absa. UMnu Masebeni wagcina edutshulwe wabulawa esemzini wakhe ngoNhlolanja (February). Kuthiwa lo R103 million, wawufaka kuma akhawunti ehlukene kusukela ngoMandulo (September) kuya kuZibandlela (December ) wangonyaka odlule.
Ngaphandle kukaMnu Ntombela, abanye abantu okuthiwa bahlomula kule mali, nguMnu Gershom Matomane, ongumnikazi weMaduna Gubevu Project Trading (PTY-LTD), okubikwa ukuthi wathola u-R59 million waboshwa wadedelwa ngebheyili ka-R30 000 noNkz Nonela Nondlanzi, okuthiwa wafakelwa u-R290 000. Akuveli ukuthi kwafakwa malini kuMnu Ntombela. Okhulumela oKlebe eGauteng, uNkz Phindi Mjonondwane, uthi uMnu Masebeni ongungqondongqondo kuleli cala waboshwa nomkakhe, u-Athembile, uMaMpani, badedelwa ngebheyili ka-R50 000 umuntu emunye.
“Icala likaMnu Masebeni lagcina lihoxisiwe emuva kokuba inkantolo yathola isitifiketi sokuthi akasekho emhlabeni ngoNhlolanja (February), wadutshulwa ngaphandle komuzi wakhe eZibeleni, e-Eastern Cape,” kusho uNkz Mjonondwane. Uveze ukuthi sekutholakale imali ewu-R66 million emabhange, abasolwa ababengakayisebenzisi. “Abanye babasolwa besebethenge ngisho izimoto nemizi, konke okuzoshaqwa ukuze kukhokheke le mali yebhange (Absa). “Okwamanje zintathu izimoto umbuso ozozishaqa, okusolwa ukuthi zathengwa ngale mali eyayikhwatshaniswa,” kusho uNkz Mjonondwane.
Kunezinsolo zokuthi imoto kaMnu Ntombela entsha ceke, iMercedes V250d, abehlale echoma ngayo yonke indawo lapho ehamba khona ethi wayithenga ngokheshi, kayikweleti aze asho nokuthi wayithenga ngo-R2 million, ingenye yezizoshaqwa ngamaphoyisa. Kuthiwa uMnu Masebeni wayengesinye seziguli zikaMnu Ntombela, imali abebenikana yona, wayesuke ekhokhela ukwelashwa. UMnu Ntombela uyinyanga edumile, kwaziwa ukuthi ungumuntu ongumacaphuna kusale. Ezinkundleni zokuxhumana ubekubeka kucace ukuthi uyakwazi ukusiza abantu bacebe, bese endlala imali yakhe ukukhombisa ukuthi naye akaswele.
Ubaziwa ngokwenza imicimbi emikhulu yomasikandi. Ngesikhathi izwe lisavaliwe ngenxa yokubheduka kokhuvethe, waqasha inqwaba yabaculi ukubalekelela ukuba baxoshe ikati eziko, njengoba kwakungekho lapho beqashwa khona. Ubewusizo ngisho kubaculi abasafufusa, evumbulula amakhono labo, abalekelele ukuba baqophe, konke lokhu ekwenza ngemali yakhe. Ubaziwa nangokusebenza nenhlangano esiza amaphara, amaningi awo abegcina eshiya ukuhlala emgwaqweni, eseshayela amatekisi, ishintsha impilo yawo. Udume nangokunikelela abaswele edla ukotoni egqoka amalebuli abizayo, aze achaze ukuthi izimpahla azigqokile zibiza malini. Kunenqwaba yabantu abaqashile, kubalwa abaqaphi bakhe nabasizayo.
Iziguli zakhe uma ziyohlolan noma ziyokwelashwa, bezamukelwa ngepuleti lokudla elihambisana nesiphuzo uma zisalinde ukungena esigodlweni sakhe. UMnu Ntombela ubengagcini lapho, wakhela amakilayenti akhe indawo yokulala njengoba wavusa isithabathaba sendlu emzini wakhe, ayibiza ngendawo yokulala iziguli ezisuka kude, zingakhokhi ngisho isenti. thandeka.ngobese@ilanganews.co.za
Previous articleUhlelelwa umcimbi umfundi wase-UKZN
Next articleUdwebele inkantolo isithombe ngokutholakala kwemoto kanjiniyela